ဝါးခယ်မ : မောင်မောင်ဖောင်တိန် ရဲ. မြန်မာဘောလုံး ကာတွန်းများ
မောင်မောင်ဖောင်တိန် ရဲ. မြန်မာဘောလုံး ကာတွန်းများ
Posted by အဇ္ဇုန at 3:48 PM
ဖိုတိုကော်မန်. လိုချင်သူများအတွက် - Photo Comment ...
မုံးကိုးကို အရောက် ချီခဲ့တယ် - နေရီ
မုန်းကိုး တိုက်ပွဲ ရှင်းလင်းမှု
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးများအကြောင်း
စကော်ပီယံ ဂိုဏ်း ဆိုသည်မှာ
မုန်းကိုး ရောက်ဖို. စစ်ကူတွေ ဘာလို.ကြာနေရတာလဲ
ပွိုင့် ၂၂၀၂ မှ နေ၀န်းနီနှင့် လင်းယုံတုို့၏အောင်ပဲ...
ခောတ် ကို ထင်ဟပ်စေသော ကာတွန်းများ
ထိုင်း ဘုရင်သစ် အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ကွယ်လွန်သူ ၏ လိပ်ပြာ ပြန်ခေါ်ရာမှ ........ ( ဖြစ်ရပ...
ပြင်ဦးလွင်က အထင်ကရ ဝိဥာဉ် လွှတ်ထားတဲ့ သစ်ပင်
'A first andalast' - Ligue2game halted after homophobic chants - A referee in France took strong action after hearing ugly abuse being shouted from fans, bringing the action toastandstill for several minutes